Tsvaga Shadows editorials
Vol. 13 APRIL, 1911. Nha. 1
ZVINoshamisa sei uye zvakajairika chinhu chinhu mumvuri. Mimvuri inotikanganisa isu sevacheche mune zvakaitika zvedu zvepakutanga munyika ino; mimvuri inotiperekedza mukufamba kwedu kubudikidza neupenyu; uye mimvuri iripo patakasiya nyika ino. Chiitiko chedu nemimvuri chinotanga munguva pfupi mushure mekunge tauya mumamiriro ekunze epanyika uye taona pasi. Kunyangwe isu munguva pfupi tinokwanisa kuzvigonesa kuti tinoziva izvo mimvuri iri, asi vashoma vedu takaiongorora zvakakwana.
Sevacheche isu takarara muzvivakwa zvedu uye takatarisa uye nekushamisika pamimvuri yakakandirwa padenga kana madziro nevanhu vanofamba mukamuri. Mimvuri iyoyo yaive isinganzwisisike uye isinganzwisisike, kudzamara tanga tagadzirisa dambudziko mupfungwa dzevacheche nekuona kuti kufamba kwemumvuri kunoenderana nekufamba kwemunhu aive neakadzimira nemumvuri wawo, kana pakufamba kwechiedza chaiita kuti chioneke. Zvakadaro zvaida kutariswa uye kuratidzwa kuti uwane kuti mumvuri waive wakakura kana uri padiki pachiedza uye uri kure kubva pamadziro, uye kuti iwo waive mudiki uye uchityisa kana waityisa kubva kure kubva pachiedza uye padyo nemadziro. Gare gare, sevacheche, takatandadzwa neye sungura, geese, mbudzi, uye mamwe mimvuri yakagadzirwa neimwe shamwari nekunyengedza kwemaoko ake. Sezvo takakura, takanga tisingachavarairwe nekutamba kwemumvuri kwakadaro. Mimvuri ichiri inoshamisa, uye zvakavanzika zvakavapoteredza zvicharamba zviripo kusvikira taziva mhando dzakasiyana dzemumvuri; mimvuri ndeipi, uye ndezvei.
Zvidzidzo zvemumvuri zvehudiki zvinotidzidzisa maviri emirau yemimvuri. Kufamba uye kushanduka kwemimvuri pamunda wavo inosiyana nechiedza nekwavanoonekwa uye nezvinhu zvinowoneka kunze uye mimvuri yavari. Mimvuri yakakura kana idiki sezvo avo vanoikanda vari kure kana padyo nebindu pane iyo mimvuri inoonekwa.
Tinogona kunge takanganwa izvozvi chokwadi sezvatinokanganwa zvakawanda zvezvidzidzo zvakakosha zveudiki; asi, kana ivo vakadzidziswa, kukosha kwavo nezvokwadi zvichatikumbira mumazuva anotevera, apo tichaziva kuti mimvuri yedu yachinja.
Kune, tinogona pari zvino kutaura, zvinhu zvina zvakakosha pakakanda mumvuri: Kutanga, chinhu kana chinhu chinomira mukati; chechipiri, iwo mwenje, unoita kuti uonekwe; chetatu, mumvuri; uye, chechina, iyo munda kana skrini yakavonekwa pamumvuri. Izvi zvinoita sezviri nyore zvakakwana. Patinoudzwa kuti mumvuri unongova wekunongedza uri pamusoro pechinhu chero chipi zvacho che opaque chinhu chinotenderedza mheni dzemwenje dzinowira pamusoro penzvimbo iyoyo, tsananguro yacho inoita seyakareruka uye inonzwisisika nyore sekuita kubvunzurudza zvisina basa. Asi idzo tsananguro dzakadaro, kunyangwe dzingave dziri, hadzigutse zvakakwana pfungwa kana nzwisiso. Mumvuri une humwe hunhu hwemuviri. Mumvuri unopfuura pakungoita kunze kwechinhu chinogadzika chiedza. Iyo inoburitsa mimwe mhedzisiro padziri uye inokanganisa pfungwa zvinoshamisa.
Yese miviri inodaidzwa kuti opaque ichaita kuti mumvuri ukandwe kana iwo wakamira pamberi pewakabva kwaunobva chiedza; asi chimiro chemumvuri uye nemhedzisiro yazvinogadzira zvinosiyana zvichienderana nechiedza icho chinoita mumvuri. Mimvuri yakakandirwa nemheni uye nemhedzisiro yadzo zvakasiyana pamumvuri unokonzerwa nechiedza chemwedzi. Chiedza chenyeredzi chinoburitsa zvakasiyana. Mimvuri yakakandwa nemwenje, gasi, magetsi emagetsi kana nechero zvipi zvinhu zvinogadzirwa zvakasarudzika maererano nekwavo, asi mutsauko chete unoonekwa pakawoneka ukuru kana kushoma kusiyanisa nekubuda kwechinhu chiri pamusoro pechinhu mumvuri wakandwa.
Hakuna chinhu chemuviri chiri chengwaru mupfungwa yekuti hazvikanganisike kana kungopenya mwenje wese. Muviri wega wemuviri unosangana kana kucheka mamwe maarangi echiedza uye anotakura kana kuonekera kune mamwe maarangi.
Mumvuri hausi kungovapo kwechiedza chiri panongedzo rechinhu chinorikanganisa. Mumvuri chinhu pachawo. Mumvuri chimwe chinhu chinopfuura silika. Mumvuri unopfuura kusavapo kwechiedza. Mumvuri ndiko kufananidzira kwechinhu chakabatanidzwa nechiedza icho chinoratidzwa. Mumvuri ndiko kufungidzira kwekopi, mukwikwidzi, kaviri, kana mweya wechinongedzo. Pane chechishanu chinhu chinodiwa pakukonzera mumvuri. Chinhu chechishanu mumvuri.
Kana tikatarisa pamumvuri tinoona kunze kwechinhu chakayerwa, pane iyo nzvimbo inosangana nemumvuri. Asi isu hatisi kuona iwo mumvuri. Mumvuri chaiwoiwo nemumvuri chaiwo hazvisi zvekungotsanangurwa. Mumvuri kufungidzira kwemumvuri wemukati pamwe nekubuda kwemuviri. Mukati memuviri wemuviri haugone kuoneka nekuti ziso harina kuchena pamwaranzi yechiedza inouya neye mukati momuviri uye inobatsira mumvuri wayo. Yese yemumvuri kana mumvuri unogona kuvonekwa kuburikidza neziso ndiko kubuda kwechiedza chete, kune iro ziso rine musoro. Asi kana kuona kwakadzidziswa, muoni anokwanisa kuona zviri mukati memuviri mukati maro nhengo dzese nemumvuri wake, nekuti mwenje unopfuura nemuviri unofadzwa uye unotakura kopi inonzwisisika yenhengo dzomuviri zvinopfuura. Nzvimbo yepanyama iyo iyo mumvuri unoonekwa, ndiko kuti, iyo inoita kuti kubuda kwechiedza muchimiro chechitunha kuonekwe, kwakasimbisa pamusoro payo kopi yemumvuri, uye inokanganiswa nemumvuri kuenda dhigirii iyo inoramba ichiratidzira kwenguva refu mushure memuviri kana mwenje unokanda unobviswa.
Kana pamusoro pehwandefa zvaigadziriswa nemwaranzi yechiedza inodarika nemitumbi inonzi opaque uye inokanda mumvuri, nzvimbo iyi yaizochengeta mucherechedzo kana mumvuri, uye zvaigoneka kune munhu ane kudzidziswa kuona kwete chete chirevo. yemufananidzo, asi kurondedzera uye kuongorora iwo wemukati wepakutanga iwo mumvuri. Izvo zvave zvichikwanisika kuongorora mamiriro emuviri mupenyu panguva yemumvuri fungidziro uye kufanotaura remangwana nyika dzehurwere kana hutano zvichienderana neyekuongororwa. Asi hapana plate kana pasi inochengetedza kushamisira kwemumvuri sezvo ichionekwa neyakajairwa kuona kwenyama. Icho chinonzi mumvuri, kubva pakuona kwenyama, chinoburitsa mimwe mhedzisiro, asi izvi zvisingaonekwi.